Usobishini umculi kaMaskandi owahlasela intatheli | News24
Usobishini umculi kaMaskandi owahlasela intatheli
Durban - Selisezithebeni zabameli bephaphandaba ILANGA udaba lomculi kamasikandi odlubulundele emngcwabeni washaya intatheli yeLANGA isemsebenzini KwaNongoma, enyakatho yeKwaZulu-Natal.
UMthandeni "iGcokama Elisha" Manqele, uzifake obishini ngesikhathi ejaha intatheli yeLANGA, uMthobisi Sithole, eyishaya phambi kwabantu ngesikhathi kuqhubeka umngcwabo womlandeli kamasikandi, uMthokozisi "Salabemkhuluma" Xulu obefihlwa ngoMgqibelo.
Kubikwa ukuthi leli ciko lidlubulundele ngisho uzakwabo osemnkantshubomvu kumaskandi, u-Ali Mgube, ezama ukulivimba.
UXulu obengumlandeli womculi kamaskandi, uMjikijelwa "iChalaha likaShafuza" Ngubane, udutshulwe eCurries Fountain, eThekwini ngesikhathi kusuka udungunyane phakathi kwabalandeli bakaKhuzani "iNdlamlenze" Mpungose nabeGcokama kwiNqokotho Maskandi Festival ebihlelwe nguCharles Dlamini emasontweni amabili edlule.
OLUNYE UDABA: Umculi kamaskandi uhlasele intatheli yeLANGA
Ngokusho koMhleli Omkhulu weLANGA, uThobile Nxumalo, abameli baleli phendandaba basacubungula amaphepha ngaphambi kokuba bathathe izinyathelo ezifanele.
"Siphoxekile ngesenzo saleli ciko. Sicela wonke amaciko aziphathe ngendlela eyamukelekile emphakathini ukuze kusebenzeke kahle nawo," kusho uNxumalo.
UMhleli weSolezwe okungelinye lamaphephandaba esiZulu, uSlindile Khanyile, uthe bayasigxeka isenzo sokuhlaselwa kwezintatheli.
"Sicela kube nokubekezelelana ngoba sonke siyadingana. Abafundi bethu esibabhalelayo okungabalandeli babo, bayadinga ukwazi ukuthi kwenzekani, ngakho kumele kusetshenziswane. Ngeke sikuvumele ukuphazanyiswa kokusebenza kwezintatheli noma yingayiphi indlela noma kwenziwa ngubani," kusho uNkz Khanyile.
ISekela-sihlalo leSouth African National Editors Forum (Sanef), uKaty Katopodis, lithe basigxeka ngamagama wonke isenzo sokuhlaselwa kwezintatheli zisemsebenzini. Uthi uma umuntu engahambisani nokubhalwe yintatheli, kasikho nesincane isidingo sokuyishaya.
"Uma ungeneme ngokubhalwe yintatheli xhumana nomhleli. Uma umhleli ehluleka wukukusiza ungadlulela phambili kwiPress Ombudsman. Kuyicala elibomvu ukushaya intatheli futhi kukhinyabeza nelungelo layo elishicilelwe kumthethosisekelo wezwe lokubika ngokukhululeka," kusho uNkz Katopodis.
Khayelitsha 13:22 PM